नेपाली डान्सिङ रियालिटी शो "बुगी - वुगी" मा कबिता नेपाली बनिन सुपरस्टार -
फोटो फिचर मनोरञ्जन समाचार
२०७५, २० श्रावण आईतवार ०३:१० August 5, 2018 clickonLeaveaComment on नेपाली डान्सिङ रियालिटी शो “बुगी – वुगी” मा कबिता नेपाली बनिन सुपरस्टार
राजधानी – एपी वान टेलिभिजनद्वारा आयोजित अन्तर्‍ाष्ट्रिय डान्सिङ रियालिटी सो ‘बुगीवुगी’को फाइनल राउन्डमा आफ्ना अन्तिम दुई प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै सर्लाहीकी १८ वर्षीया कविता नेपाली नेपालकै पहिलो डान्सिङ सुपरस्टार बनेकी छन्।
उपाधिसँगै उनले नगद २५ लाख पनि जितिन्। फ्रस्ट रनराप प्रगती पुन बनिन् भने सेकेन्ड रनराप सरोज मोक्तान भए । प्रगतिले ६ लाख जितेकी छिन् भने सरोजले चार लाख नगद पाएका छन् । बुगीवुगीका लागि अनलाइन अडिसनमार्फत् देशभरबाट तीन हजार डान्सर सहभागी थिए। तीमध्ये एक सय ५० जना डान्सरलाई दोस्रो राउन्डको अडिसनका लागि काठमाडौं बोलाइेको थियो। उनीहरू मध्येबाट १८ जना प्रतियोगी छानिए। त्यसबाट पनि भिडियो राउन्ड, कला प्रदर्शन राउन्डलगायत विभिन्न चरणका कठिन सिँढी उक्लँदै उत्कृष्ट तीन छनोट भएका हुन्। अन्तिम राउन्ड दुई सातासम्म चलेको थियो। फाइनल विजेता घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धी प्रगति, कविता र सरोजका फ्यानहरूले उनीहरूको पक्षमा भोट गर्न विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेका थिए।
अन्तर्‍ाष्ट्रिय फे्रन्चाइज बुगीवुगी रियालिटी सो नेपालमा एपीवान टेलिभिजनले पहिलोपटक आयोजना गरेको हो। भारतको सोनी टेलिभिजन सँगको सहकार्यमा एपीवान टेलिभिजनले नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्‍ाष्ट्रिय फेन्चाइजका रियालिटी सोहरू आयोजना गरिरहेको छ। त्यसैको निरन्तरतास्वरूप डान्स रियालिटी सो बुगीवुगी सञ्चालन गरिएको हो। करिब आठ महिनासम्म चलेको यो कार्यक्रमको निर्णायकमा अभिनेता दिलीप रायमाझी, अभिनेत्री प्रियंका कार्की र कोरियोग्राफर कविराज गहतराज रहेका थिए। ५० प्रतिशत निर्णायक र ५० प्रतिशत दर्शकको भोटका आधारमा उत्कृष्ट डान्सर छनोट गरिएको हो।
सभार् : अन्नपुर्न पोस्ट्
५ वोटा बिश्व प्रसिद्द लोगो हरु मा के लुकेओ छ होला? उक्त लोगो हरु को तात्पर्य के होला? कहिले सोचनु भएको छ???
ल हेर्नुस् प्रधानमन्त्री ओली को कांग्रेस लाई आरोप ” झगडा मिलाउन नसकेर कांग्रेसले कार्यकर्ता सडकमा उतार्‍यो “
अब हरेक पाँच वर्षमा डाक्टरको परीक्षा , उतिर्ण नभए लाइसेन्स खारेज
२०७५, १६ मंसिर आईतवार १२:१७ December 2, 2018 clickon
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन
२०७५, १७ पुष मंगलवार १४:४८ January 1, 2019 clickon
गर्भ एउटाको , विवाह अर्कोसँग …
२०७७, ८ असार सोमबार ०८:३१ June 22, 2020 clickon